Jilli ODF nagaan Finfinnee quphatuu ob.Leencoo Baatii mirkaneessan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Jilli ODF nagaan Finfinnee quphatuu ob.Leencoo Baatii mirkaneessan
Jilli ODF nagaan Finfinnee quphatuu ob.Leencoo Baatii mirkaneessan
Jilli ODF ob.Leencoo Lataan hoogganamu nagaan Finfinnee seenuu dubbi-himaan dhaabichaa ob.Leencoo Baatii mirkaneessaniiru. Itti dabaluudhaanis, ODF waadaa woggaa lama dura ummata Oromoo hundaafi deeggartoota isaaf seenes guutuu isaa dubbataniiru.
Ob.Leencoon gaafiifi deebii Raadiyoo Bilisummaa Oromoo (RBO) wojjiin taasisaniin ODF qabsoo nagaa geggeessuudhaaf karoora baafate dhugoomsuuf gara biyyaatti deebi’uu ibsaniiru. Ob.Leencoon, ‘Ummanni Oromoo guddaan biyya jira, abbaan qabsoo kanaa biyya jira, abbaa qabsoo kanaa hirmaachisutu nurra jira, abbaa qabsoo kanaa hirmaachisuuf ammoo ummata kana jiddutti argamutu nurra jira,’ jechuun sababa ODF biyyatti galuun barbaachiseef RBOtti himaniiru.
Ob.Leencoo Batii ODF qabsoo Oromoo qabsoo baqaa ta’uu irraa dandamachiisuu isaa tuqanii, Oromoon hundi mataa olqabatee ufitti amaniinsa isaa cimsatee akka qabsaayuuf waamicha isaanii dabarsaniiru.
Oromoon wolhadheessuufi wolxureessuu irraas ufqusatee, hundi waan qabsoo Oromoo funduratti furguggeessuu malu irratti akka xiyyeefatus gaafataniiru, ob.Leencoo Baatii.
odf finfinnee seene
Previous articleJilli ODF ob.Leencoo Lataan dursamu gara Oromiyaatti qajeele
Next articleIs Violent Change Inevitable in Ethiopia?